TTSweet: Chinese Wok
Posted by T T Sweet at 11:53 PM
A hay hay hay.........tt sweet Yae :)
T T Sweet January 21, 2014 at 12:35 AM
ဝေ ... ခေါ်လားဟင် ... အားပေးမဲ့သူနည်းနေလို့ ပိတ်သတ်တွေ ဘယ်ရောက်ကုန်မှန်းမသိဘူး။ မရေးတာကြာလို့။
kay January 21, 2014 at 1:57 AM
တီဆွိရေ.. အိမ်မှာလည်း ၀ယ်သုံးတယ်.. အလုပ်တော့ ရှုပ်တယ်။ ဒါမဲ့..ကျမတော့ ရိုး၂ ဆေးကြာပြီး ဆီလေး နည်းနည်းပွတ် သိမ်းထားလိုက်တာပါပဲ။ နောက်မုို့ဆို သံချေးတက်တယ်
Arr pay par tal TTsweet yal...:)
Raymond.Kyaw Minn Naing January 21, 2014 at 2:40 PM
ရေးသာရေးပါဗျို့..ပိတ်သတ်ကြီးရှိတယ်၊ ကျွန်တော်ဆို ၀က်ကုန်းဘောင်ကို ၂ပတ်တစ်ခေါက်လောက်လာလာကြည့်တယ်၊ ကြော်တိုင်းလဲကြည့်တယ်ခုထိမမှတ်မိသေးဘူးဟီး..
မိုးဦးစံပယ် January 21, 2014 at 5:58 PM
တီဆွိရေ.....ခေါက်ဆွဲကြော်တပွဲ။ ၀က်ဆီများများနဲ့...။ အမာခံ ပိတ်သတ်ကြီးပါ။
ရေးပါနော် အမြဲ လာလာဖတ်ပါတယ် ညီမလေးရေ
တန်ခူး January 22, 2014 at 2:12 AM
သူငယ်ချင်း မိုက်မှမိုက်... ဒီမှာတော့ ဒယ်အိုးကို အုန်းတံမြက်စည်းလိုမျိုး တံမြက်စည်းအတိုလေးနဲ့ ဆေးတာ တွေ့ ဖူးတယ်
မီးမီးငယ် January 22, 2014 at 6:55 AM
khin January 22, 2014 at 4:11 PM
Oww...don't worry... I always check for new uploads almost everyday. I also wish that u can post everyday.
မယ့်ကိုး January 23, 2014 at 1:56 PM
မမစာရေးတိုင်း ပျော်ရွှင်ရလို့ အမြဲလာဖတ်တယ်နော်။ :)
San San Htun January 26, 2014 at 1:22 PM
တီတီဆွိ - ဂစ်...ဂစ်..
ပရိသတ် - ခစ်...ခစ်
ပို့ စ်အသစ်တွေ မတင်ပေမဲ့လည်း ဘာချက်ရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစား..တီတီဆွိပို့ စ်တွေ မွှေနောက်ဖတ်..
ko9February 11, 2014 at 11:54 PM
တီတီဆွိရေ....သူများလဲ ရှူပ်လို့ ရေနဲ့ ပဲဆေးတာ နောက်တော့သံချေးတွေတက်လို့ လွတ် ပြစ်လိုက်တာကြာပေါ့ကွယ်.....ဘာမှအားမငယ်နဲ့ နော်......ဟဲဟဲ အားပေးတာလေ။